कसरी इलेक्ट्रिक बाइकको ब्याट्री स्वस्थ राख्ने ebike Shuangye
घर ब्लग समाचार कसरी एक इलेक्ट्रिक बाइक को ब्याट्री स्वस्थ राख्न
कसरी एक इलेक्ट्रिक बाइक को ब्याट्री स्वस्थ राख्न
इलेक्ट्रिक बाइकको ब्याट्री एक ई-बाइकको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो, यो निर्णय गर्न सक्दछ कति लामो ई-बाइक जान सक्छ। यदि केहि इलेक्ट्रिक बाइकको ब्याट्री सजिलैसँग प्रतिस्थापन गरिएको थियो, जस्तै शुआन्गे इलेक्ट्रिक बाइक अनुकूलन योग्य हटाउन योग्य बैटरी डिजाइन, तर अब प्रायeबाइकको ब्याट्री अझै पनी गाह्रोले प्रतिस्थापन गर्दछ। रeबाइक ब्याट्री प्रतिस्थापन लागत सस्तो छैन। कसरी तपाईको इलेक्ट्रिक बाइकको ब्याट्री स्वस्थ राख्नु एक आवश्यक चीज हो। यसका जीवनलाई लामो बनाउन केही सुझावहरू छन्।
प्रयोगमा नहुँदा तपाईको इ-बाइकलाई चिसो, सुख्खा ठाउँमा राख्नुहोस्। इ-बाइकको ब्याट्रीको प्रदर्शनलाई प्रभाव पार्न प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशमा तपाईंको ई बाइक छोड्नुहोस्।
यदि लामो समयको लागि प्रयोगमा छैन भने, ई-बाइक भण्डार गर्नु अघि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि इलेक्ट्रिक बाइकको ब्याट्रीमा अझै केही शुल्क छ। आदर्श रूपमा, ब्याट्री %०% र %०% बीचमा चार्ज गरिनु पर्दछ। ब्याट्रीमा भएको क्षतिलाई कम गर्न पूर्ण रूपमा पावर र चार्ज ब्याट्रीको बाहिर चलाइएको व्यवहारलाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
जाडोमा, यदि तपाईंले आफ्नो ई-बाइकलाई चिसो स्थानमा भण्डार गर्न आवश्यक छ, जस्तै घरको बाहिर वा ग्यारेजमा। यसले इलेक्ट्रिक बाइकको ब्याट्री चार्ज गर्नु अघि न्यानोमा ध्यान दिनुहोस्। हटाउन योग्य प्रकार्यको साथ केहि इलेक्ट्रिक बाइकको ब्याट्री, यो ब्याट्री हटाउन र घर मा स्टोर गर्न यति सुविधा छ। त्यसोभए तपाईं सिधा चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ।
अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि ब्याट्रीको नियमित र पूर्ण डिस्चार्ज ब्याट्रीको लागि हानिकारक छ। ब्याट्रीको चार्ज ०% सम्म पुग्न दिनुहोस् को समय घटाउनुहोस्। शक्ति समाप्त नभएसम्म चार्ज हुन पर्खनुहोस्, नियमित चार्ज गर्ने बानी राख्नुहोस्।
केवल चार्जर प्रयोग गर्नुहोस् जुन इलेक्ट्रिक बाइकको साथ आपूर्ति गर्दछ; वैकल्पिक रूपमा, यदि तपाईंलाई ब्याकअपको रूपमा अझै एक चार्जर चाहिन्छ भने सक्कली निर्माताबाट यसलाई लिनुहोस्। यसले अनावश्यक समस्या कम गर्न सक्छ। ओभरचार्ज इलेक्ट्रिक बाइकको ब्याट्री बिगार्ने पक्ष हो। अब प्राय: निर्माणकर्ताले स्मार्ट चार्जर प्रदान गर्दछ जुन पहिले नै चार्जर सेट गर्न ger ०% वा १००% ब्याट्री चार्ज गर्दछ।
यी सावधानीहरूले कसरी तपाईंलाई इलेक्ट्रिक बाइकको ब्याट्री स्वस्थ राख्नको लागि बताउँछ। यदि तपाईंले ती गर्नुभयो भने, शायद एक ई-बाइकको ब्याट्री or वा years बर्ष बीचको हुनुपर्दछ। वास्तवमा, हटाउन योग्य ब्याट्री डिजाइनको साथ एक इलेक्ट्रिक बाइक किन्दा एक ई-बाइकको लागि लामो जीवन दिन सक्छ।
यदि तपाईं इलेक्ट्रिक बाइकको ब्याट्री वा इलेक्ट्रिक बाइक जानकारीको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अघिल्लो लेखहरू ब्राउज गर्न वा हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, तल सन्देश छोड्न पनि छनौट गर्नुहोस्।
Tags:ई-बाइक ब्याट्री इलेक्ट्रिक साइकलको ब्याट्री
अघिल्लो: लामो दूरीको इलेक्ट्रिक बाइक कुन हो भनेर कसरी थाहा पाउने?
अर्को: पावर असिस्ट बाइक भनेको के हो?
ई-बाइक ब्याट्री बजारको बारेमा ठूलो कुरा
V 36V लुकाइएको ई बाइकको ब्याट्री H1-350
इलेक्ट्रिक बाइक को लागी ब्याट्री: तीन चीज तपाई लाई जान्नु पर्छ
बोतल के मोटरसाइकल बाइक ब्याट्री के हो?